Everton oo Rabta in kooxaha manchester united iyo barcelona ay ku garaacdo Norwich City daafacdeeda Max Aarons.
Home Suuqa kala iibsiga Everton oo Rabta in kooxaha manchester united iyo barcelona ay ku garaacdo...
MANCHESTER, ENGLAND - JULY 26: Max Aarons of Norwich City during the Premier League match between Manchester City and Norwich City at the Etihad Stadium on July 26, 2020 in Manchester, United Kingdom. (Photo by Visionhaus)
Everton ayaa rajeynaysa inay ku garaacdo kooxaha Man Utd iyo Barcelona saxiixa daafaca Norwich City Max Aarons kaas oo lagu qiimeeyo lacag dhan 35 milyan ginni sida ay warineyso Sky Sports Carlo Ancelotti ayaa xiiso weyn u haya in Toffees lasoo Saxiixato Aarons oo 21 sano jir ah oo sidoo kale xiiso ka helaya Roma.
Everton ayaa diyaar u ah inay dagaal la galaan kooxaha sida Manchester United iyo Barcelona oo ay ku kala saxiixdeen daafaca lagu heli karo 35 milyan ginni ($ 49.5m) Max Aarons, sida laga soo xigtay Sky Sports. Barcelona ayaa dalab u gudbisay Norwich City balse laga diiday bishii hore.
Norwich City ayaa durbaba iska casishay inay lumiso ciyaaryahanka mustaqbalka dhow, haatan waxay u muuqataa inay si fudud lacag ugu heli karto ilaa iyo inta ugu badan.
Previous articleHernan Crespo oo shaaca ka qaaday cidda ku booriyay Lautaro Martinez inuu diido dalabkii Barcelona.
Next articleMacalinka real madrid Zinedine Zidane oo ka hadlay guushii ay gaartay kooxdiisa.